Xuduudaha ayaa Bilaabaya Duulimaadyo aan joogsi lahayn oo Belize ah oo ka imanaya Denver iyo Orlando
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Belize Breaking News » Xuduudaha ayaa Bilaabaya Duulimaadyo aan joogsi lahayn oo Belize ah oo ka imanaya Denver iyo Orlando
Airlines • Airport • Belize Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Guddiga Dalxiiska Belize waxay u arkaan bilowga adeegga Frontier Airlines ee Belize inay tahay ballaarinta muhiimka ah ee isku xirnaanta caalamiga ah ee dalka.
Duulimaadkii ugu horreeyay wuxuu Denver ka tegi doonaa 8:36 subaxnimo wuxuuna imaan doonaa Belize 13:44 pm.
Duulimaadka labaad wuxuu ka tagi doonaa Orlando 13:42 pm wuxuuna imaan doonaa Belize 15:10 pm. Waxay ka tagi doontaa Belize oo tagi doontaa Denver markay tahay 16:15 pm waxayna imaan doontaa 9:40 pm.
Adeegga, oo marka hore la bixin doono Sabtida oo keliya, wuxuu ahaan doonaa sannadka oo dhan oo suuragal u ah kobcin dheeraad ah mustaqbalka.
The Guddiga Dalxiiska Belize (BTB) wuxuu soo dhaweynayaa ku dhawaaqista Frontier Airlines bilowga adeeg aan kala joogsi lahayn Belize oo ka yimid Denver, Colorado iyo Orlando, Florida laga bilaabo Disembar 11, 2021. Adeegga, oo marka hore la bixin doono Sabtida oo keliya, wuxuu ahaan doonaa sannadka oo dhan iyada oo ay suuragal tahay koboc dheeraad ah mustaqbalka.
Duulimaadkii ugu horreeyay wuxuu Denver ka tagi doonaa 8:36 subaxnimo wuxuuna imaan doonaa Belize 13:44 pm. Duulimaadkaas wuxuu ka tagi doonaa Belize una socdaa Orlando markay tahay 14:49 pm wuxuuna imaan doonaa 18:14 pm. Duulimaadka labaad wuxuu ka tagi doonaa Orlando 13:42 pm wuxuuna imaan doonaa Belize 15:10 pm. Waxay ka tagi doontaa Belize oo tagi doontaa Denver markay tahay 16:15 pm waxayna imaan doontaa 9:40 pm.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno adeegga Belize City laba suuq oo waaweyn oo Mareykanka ah: Denver iyo Orlando," ayuu yiri Daniel Shurz, oo ah madaxweyne ku xigeenka ganacsiga, Frontier Airlines. "Waxaan rajeyneynaa inaan ku soo dhaweyno booqdayaasha Belize dusha sare ee diyaaraddayada cagaaran si ay u sahamiyaan bay'ada dabiiciga ah ee gaarka ah, duurjoogta iyo waxqabadyada qorraxda ka buuxdo iyo sidoo kale dadka maxalliga ah ee doonaya safar la awoodi karo oo ay ku tagaan Mareykanka"
Guddiga Dalxiiska ee Belize wuxuu u arkaa bilowga adeegga Frontier Airlines ee Belize inuu yahay ballaarinta muhiimka ah ee isku xirnaanta caalamiga ah ee dalka maadaama ay awood u yeelan doonto booqdayaasha Galbeedka iyo Koonfur-Bari Mareykanka fursado safar oo ballaaran si ay ugu raaxaystaan ​​Belize oo ah meel fasax ah oo heer sare ah.
Dadaallada Belize ee ah inay kordhiso isku -xirnaanta duulimaadyada caalamiga ah ayaa durba miro dhal ah. Bisha May waxay diiwaangelisay 19,544 qof oo soo booqday Belize halka bishii Juun la diiwaangeliyay 26,215 booqde. Lambarada bisha Luulyo ayaa sidoo kale si wanaagsan u socda, taas oo muujinaysa in warshadaha dalxiiska ee Belize ay ku socoto wadadii soo kabashada.
Diyaarad nooca loo yaqaan Prototype ayaa ku burburtay Ruushka oo ay ku dhinteen dhammaan dadkii ...
Chimpanzee, Shimbiraha, Ilaalinta Duurjoogta ayaa ku dhammaatay ...
Amiirad Margriet oo u dhalatay Netherlands oo lagu magacaabo Godmother ...
Ethiopian Airlines: U duuli Enugu, Nigeria hadda
Madaarka Frankfurt Oo Bilaabay Jadwalka Jiilaalka Cusub:...
Guddiga Dalxiiska Afrika “One Africa” ayaa hadda ...
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato rarida xilliga fasaxa...
Caafimaadka Caalamiga ah: Adduunka Cusub Kadib COVID
Boeing waxay magacowday Madaxweyne kuxigeenka cusub ee Dowlada ...
Ururinta farshaxanka xun ee cusub oo ay saxiixday Mona Hatoum ayaa la bilaabay ...
Furlough-ka COVID-19 wuxuu ku dhammaanayaa waqtiga ugu xun dalxiiska UK
Ruushka ayaa soo afjaray xayiraadihii uu saaray Austria, Switzerland ...
Kooxda Radisson Hotel Group: Galbeedka iyo Bartamaha Afrika ...
Ku soo noqoshada TUI ee Jamaica waxay noqon doontaa Isbadal Ciyaar Weyn
Basashii Ceyri oo dhan oo hadda dib loo Xusuusto Salmonella awgeed
IMEX America waxay u eegtaa Mustaqbalka Ujeedo iyo ...